Ahoana no Hihaona sy ny Daty Shinoa Tovovavy - Asia Mampiaraka ny manam-Pahaizana
Ahoana no Hihaona sy ny Daty Shinoa Tovovavy — Asia Mampiaraka ny manam-Pahaizana
Amin’izao fotoana izao, eto izahay mba hiresaka momba ny fomba afaka hihaona ANKIZIVAVY ao SHINA. Raha toa ianao pelaka dude, dia miala tsiny, ity lahatsoratra ity dia mety tsy hanampy anao. Ianao re kokoa noho ny maimaim-poana ny fangatahana iray izay hihaona any amin’ny Shina ny lahatsoratra sy I ll manoratra izany na dia tsy afaka ny fampanantenana izany dia ho tena tsara ity lahatsoratra Ity dia handeha ho nizara ho faritra isan-karazany. Voalohany: ny Fahatakarana ny Shinoa ankizivavy sy ny kolontsaina Sinoa sy ny fiaraha-monina ny soatoavina Anjara. Faharoa: ny Fahatakarana ny Shinoa ankizivavy sy ny kolontsaina Sinoa sy ny fiaraha-monina ny soatoavina Anjara. Farany: Ny fomba tsara indrindra mba hihaona sy mahasarika tovovavy Shinoa, miampy ny fomba fandaharana ho an’ny fifandraisana aminy. Ny tiako ho lazaina intsony ny iray amin’ireo zavatra haingana isika vao manomboka, raha ll po ahy. Any Shina, izay hitanao sy ny fomba ny zavatra, raha ny marina dia efa foana ny hafa. Ny olon-drehetra no manao saron-tava. Azo antoka fa izany no marina momba ny tontolo izao amin’ny ankapobeny, ny marina kokoa ny any Shina, noho ny any an-kafa. Izany dia ho heviny kokoa raha toa ianao ve efa mba Shina, ary efa za-draharaha ny kolontsaina. Ny fiainana ny ankizivavy Shinoa fa miovaova be arakaraka ny haavon’ny toerana sy ny toerany eo amin’ny fiaraha-monina. Eo ho eo mba ok mitady tsy dia manan-karena zazavavy ho foana telcos mba hahatanteraka ny ray aman-dreniny’ ny zavatra andrasana eo amin’ny lafiny fianarana, asa, ary avy eo ny fanambadiana. Ny zazavavy rehetra kosa, na izany aza, mandany fotoana be dia be ny mijery tv, matory, ary ny fihinanana. Ny fiaraha-monina shinoa mbola t baikoina ny olona ho avy handeha, efa maro ny fialam-boly, na manao na inona na inona fa dia t mamokatra eo amin’ny lafiny fampianarana sy ny vola, ka aza t manantena Shinoa ny zazavavy mba ho ami mahaliana potika ny fiainany. Rehefa avy nilaza fa, tsapako tsy maintsy ihany koa nandroaka izay Shinoa vavy no manana be dia be kokoa ny zava-mitranga noho ny hevitrao. Ny s Shinoa fahazarana ihany no hanokatra ny namana fizarana be dia be momba ny fiainany amin’ny olon-tsy fantatra dia t tena ara-dalàna. Ireo tovovavy shinoa ny manao zavatra ary matetika mahaliana ny olona, ny s fotsiny fa izy ireo aza t efa betsaka ny fahalalahana na ny fotoana malalaka ho an’ny mifanerasera na fialam-boly, fa soa ihany fa izany no miova tsikelikely. Western matetika ny olona hamantatra ny be dia be ny asa sy ny fialam-boly. Vahoaka shinoa toa hamantatra bebe kokoa ny satan’ny ny sehatra sy ny fomba vola be izy ireo, izay no mahatonga ny olona maro mba ho tena tena mitovy. Ohatra, misy ankizivavy iray, izay manana tombontsoa maro, dia tsy miankina, ary efa nandeha be dia mangatsiatsiaka na mahaliana, ary izany dia ampiharina ihany koa ny Shinoa ankizivavy ny olana dia ny ankamaroan’ny ankizivavy aza t hahazo ny fahafahana hanao izany raha tsy hoe izy ireo dia tena manan-karena. Ny vokany dia ny olon-drehetra dia manana tsara tarehy toy izany koa ny fiainana traikefa izy rehetra miezaka ny hahazo izany ara-tsosialy nankasitraka vokatra: Tsara Naoty, dia mahazo any amin’ny oniversite tsara, asa Tsara, Tsara BF sy ny Fanambadiana Ny vokany dia afaka ny ho tena mankaleo ny fifandraisana. Ianao dia tsy maintsy miverimberina ny resaka indrindra ny ankizivavy satria ny ankamaroan’ny vehivavy sy ny olon-kafa rehetra any Shina no nanosika ny alalan izany ABC olona milina. Ianao hiafara amin’ny ankamaroan’ny olona mametraka eo ihany aloha. Eto ambany ny ambony, na izany aza, dia vola mendrika ny maha ary mety ho coaxed amin ny. Na izany na tsy izany, ny hevitra dia ny hoe tokony ho fantatrao fa misy fanalahidy manokana izay miara-miasa amin’ny vahoaka Shinoa ny kolontsaina tena tsara, satria fotsiny be dia be ny olona dia tena mitovy. Ny ankamaroan’ny ankizivavy no handany ny fotoana fianarana miasa, ary nandritra ny fotoana malalaka dia: toeram-pivarotana, mihinana, mihira amin’ny KTV (Karaoke), matory, jereo Dvd na ny farany ny fandaharana malaza amin’ny FAHITALAVITRA Amerikana, sy handray narcissistic sary ny tenany (misy na dia iray manokana fakan-tsary natao manokana noho ny fanaovana ny tena tifitra). Mazava ho azy, ireo tovovavy sasany handrava ny bobongolo. Tsy misy afa-tsy ny manan-karena na raisina-fikarakarana ny ankizivavy izay tsy t mila miasa. Izy ireo matetika no mandeha eo amin’ny fahazoana ny fantsika atao, fiantsenana, ny fahazoana ny volo atao, ary mihinana, ny tsindraindray latabatra ao amin’ny trano fisotroana na mihira amin’ny KTV natsipy tao. Tsy ny rehetra miantsena dia ny iray ihany aza. Tiako ny manavaka ny karazany roa: — karena zazavavy lisitry ny mahantra zazavavy miantsena. Manan-karena zazavavy miantsena izay mividy ny bunch ny zavatra, ary avy eo dia mahazo ny kafe na mihinana zavatra amin’ny namana, mba afaka maneho eny izay nividy. Ankizivavy sasany dia mametraka sary ny WeChat (Ny hafatra ara-tsosialy app) mba hampiseho eny. Mahantra zazavavy miantsena, kosa, dia izay manao ny ankamaroany varavarankely miantsena sy mividy na zavatra mora vidy na tsy misy mihitsy, ary avy eo dia mifanena amin’ny namana, mihinana sakafo, maka sary ny sakafo, ary ny lahatsoratra ireo sary ao amin’ny WeChat amin’ny solon’ny ny lafo fividianana. Mieritreritra ny tarehiny tahaka ny hijery ahy. Jereo ny fomba tsara aho.
Arakaraka ny manana, ny kokoa ianao dia afaka ny ho. Ny fomba hafa ny olona hitsara anareo, ny sata ambaratonga, ary ohatrinona ny vola manao ireo rehetra tena zava-dehibe ao Shina. Toy ny fitsipika, ny vahoaka Shinoa no tena mitovy tanjona eo amin’ny fiainana, toy ny tsara: Izany no tena manan-danja toy ny fanabeazana dia hita ho toy ny fomba iray azo antoka tsara ny ho avy. Ny fidirana any amin’ny oniversite tsara no tena zava-dehibe ny vahoaka Shinoa ny ambaratonga rehetra. Raha tsy nandeha ny iray amin’ireo ambony ny oniversite ao Shanghai na Beijing (na tsaratsara kokoa raha ny s ny iray amin’ireo tampony amin’ny oniversite Amerikana ao Angletera, Aostralia) dia ianao ve nahazo fahafahana tsara kokoa ny fipetrahana asa tsara sy hahazo kokoa ny hiatrika ny ho an’ny tenanao sy ny ray aman-dreny. Mieritreritra aho nanisy sira. Any Shina izy ireo zaridaina izay ny zokiny vako-drazana any ambarao ny zanany lahy, ny zanany vavy, nieces sy ny zana-drahalahiny.
Ao ireo valan-javaboary, ireo Olona lalotra famantarana ireo valan-javaboahary izay maneho ny olona iray s Hight, ny karama, ny oniversite, ary na dia ny taona. Izaho manokana dia tao amin’ny zaridaina ny taona vitsivitsy indray manao Kung-Fu rehefa ny lehilahy be taona nanatona ahy ny miresaka mialoha ny milaza amiko fa ny zafikeliny niasa tany amin’ny banky, nanome ahy ny adiresiny, ary ny nanoratana ahy teo mba hanome azy. Mino aho fa azonao atao foana ny miantehitra amin’ny dadabe mba hanandrana sy ny lelam-pitana ianao. Ianao don t dia mila mivoaka ny trano. Mba hanakatona, indro ny lahatsary nahatonga ny sasany Sinoa vavy. Ao izany, dia mihira momba ny zavatra antenaina avy ry zalahy ny fanambadiana. Ny lahatsary dia manome ny sasany mazava tsara ny hevitra ny zavatra ara-kolontsaina sy ny fiaraha-monina ny soatoavina ireo. Koa izany no nisy nanatsatoka antsy tao amin’ny tany am-piandohan’ity lahatsary nataon ny sasany ry zalahy mitaraina tsy hoe afaka mahita ny vadiny noho ny fitoviana amin’ny lahy sy ny vavy.
Ny vola no hery
Ny s ihany koa ny voan ny ratsy, indrindra ao Shina. Raha manana vola any Shina, dia afaka manao na inona na inona, ary tsy midika na inona NA inona. Ny vola no mahatonga ny fahasamihafana goavana eo amin’ny lafiny ara-tsosialy ny lanjany, izany dia tena mazava tsara amantarana ny olona iray izay dia ny mahomby na tsia. Fuck ny fiainana niainany, fampandrosoana manokana. Be dia be ny olona Tandrefana hoe Sinoa ny ankizivavy dia volamena mpitrongy tany aho ary tsy miombon-kevitra tanteraka amin’izany aho ve nandre izany be dia be ny fotoana sy ny s foana ny olona manana tena voafetra ny traikefa ary aza t tena hahatakatra ny Shinoa ambadiky ny vola. Shina dia maro ny olona mahantra (mihoatra ny antsasaky ny mponina no fambolena ny mpiasa), ary rehefa re ny mahantra dia fucking sucks ianao niraikitra tamin’ny maloto toy ny fitsaboana, tsy maintsy mihinana ambany dia ambany ny kalitao ny sakafo, ary ianao ao amin’ny famindram-po ny tsy mahantra. Raha ny vola, ny vahoaka Shinoa laharam-pahamehana izany ho ambonin’ny zava-drehetra (Eny, izaho no generalizing eto) toy izany dia manome ny fiarovana izay tsy afaka ny hahazo na inona na inona fomba hafa any Shina. Ny s ny fomba fanao mahazatra ho an’ny vehivavy Sinoa manana ny zava-miafina ny kaonty banky sy ny squirrel vola levona ho azy tahaka ny nomaniny ho solon’izay amin’ny raharaha momba ny fanambadiana ho levona mandrakizay. Mieritreritra momba izany ity fomba: Ao moyen âge fotoana efa andriana sy ny tantsaha. Shina dia mbola tena mitovy izany. Rehefa manan-karena ianao toy ny andriana, fa rehefa re mahantra velona ny tantsaha s fiainana. Azo antoka, dia lehibe kokoa ny afovoany-kilasy ao Shina noho ny tsy mety efa ao Moyen âge fotoana, fa tsy i Shina no tsara tarehy be amin’ny le tamin’ny taonjato Eoropa. Eo ho eo mitady tovovavy aza t matetika no mahazo ny sain’ny maro. I shina no tena harena. Izany dia noho ny tsy fahampian’ny finoana sy ny fiarovana ny fananana vola dia midika hoe tsy maintsy ny fiarovana sy ny olona fialonana ianao. Amin’ny vola tonga lafo vidy sy ny mafana ny vehivavy. Manan-karena ry zalahy ao Shina matetika efa maro ny vehivavy eo amin’ny mandehana ka izany no mahatonga eo ho eo mitady tovovavy somary tsy hita maso, raha oharina. Tsy izaho no nilaza fa tsy mahazo saina izy ireo azo antoka fa hahazo ny sasany. Inona nanao hoe: izaho dia fa vehivavy tsara tarehy ao Shina get A L O T ny saina, toy ny na inona na inona ny hevitrao x. Mafana Shinoa tovovavy afaka mipetraka ao an-trano sy misokatra Momo na ny WeChat sy ny miandrasa minitra, avy ireo minitra antoka dia hisy fara-fahakeliny ry zalahy miezaka ny miresaka aminy, ary izy rehetra ireo dia ho vonona ny daty azy, hividy ny sakafo hariva, ary bang azy. Izany rehetra mifandray niverina foana face eny imasom-bahoaka ny ara-tsosialy nitsangana teo, amin’ny ankapobeny. Raha mijery ny ratsy ampahibemaso, ianao very tavanao, raha toa tsy mijery tsara, anao re ny fahazoana miatrika, ny zavatra ny vahoaka Shinoa no hyper fantatry ny. Tavanao no antony maro ny ankizivavy kokoa ny mifidy momba ny hoe iza izy hanambady, dia mila ny ray aman-dreny ny fankatoavana hanambady. Raha hanambady tsy misy ny fianakaviany s ny fitahiana, dia afaka ny ho voahilikilika, avy ny sisa amin’ireo fianakaviany. Tovovavy shinoa aza t ankapobeny mihantona avy miaraka amin’ny any ivelany ry zalahy. Tsy misy na tantaram-pitiavana ny tombontsoa, na misy ve ny t. Misy maningana, fa ho toy ny fitsipika ankapobeny misy zazavavy izay mihantona eo amin’ny lehilahy vahiny dia heverina ho vely azy. Ny Sinoa miasa bebe kokoa manodidina ny fotoana fa tsy noho ny fitenenana mahazatra ny fiarahana na ny famitahana toy tsotsotra mampiaraka kokoa ny foto-kevitra tandrefana sy ny famitahana no mitranga kokoa ao Frantsa na Italia noho ny any Azia. Raha tsy mitovy hevitra amiko avy eo dia vakio ny Memoirs of Casanova (fotsiny pejy lavabe) sy ny handeha ho any Frantsa sy Italia. Ny hevitra ny fotoana dia ny mamorona marim-pototra ara-tsosialy fifandraisana izay manome ny andaniny roa amin’ny endrika sasany ara-tsosialy sarobidy. Izany ihany koa no somary voafaritra mazava tsara ny fitsipika na toro lalana ho an’ny olona mba hanaraka. Na iza na iza izay nandre Sinoa vavy hoe vahoaka Shinoa aza t manao izany, na ny vahoaka Sinoa tsy t toy izany dia hahazo ny zavatra tiako holazaina. Noho ny tantara naharitra teo sy ny solombavambahoaka vondrona fanarahana ny kolontsaina Sinoa, olona matanjaka be hevitra ny zavatra Shinoa ny olona ary manaraka ny ankapobeny nifanarahana tsara. Izany dia midika fa ny vahoaka Sinoa hiafara ho tena mitovy amin’izy samy izy, raha oharina amin’ny any Andrefana izay olona be dia be kokoa individualized. Misy bebe kokoa ho azy noho izany fa raha tsorina, ireo zavatra manan-danja indrindra ny vahoaka Shinoa. Ny hevitra ny manambady noho ny fitiavana ihany no lasa malaza ao anatin’ny taona, ary na dia mbola tsy t hodinihintsika ao amin’ny be dia be ny fanambadiana. Izany dia t midika fa ny olona ao Shina aza t mifankatia na izany fitiavana izany dia t inona na inona, fa izany no midika fa ny olona vonona hanambady noho ny sata sy ny vola. Ny maro an’isa eo ho eo ny karama farany earners mahita fa tena mety hahazo mampino eo ho eo ny olon-tiany. Ao ireo fifandraisana, na izany aza, fetra ny vehivavy manao pataloha satria izy ireo no mahalala ny lehilahy angamba dia tsy afaka manao zavatra tsara kokoa. Ny marina dia matetika no maharary. Avy any ivelany ry zalahy manana be dia be ny mihevitra value efa, na inona na inona ny tena zava-dehibe, ary ny ankizivavy nahita azy ireo mahaliana fotsiny, satria izy ireo dia hafa. Izany no fironana izay mitondra ny avy amin’ny firenena hafa. Na ny ankizivavy ao amin’ny firenena, Aostralia, get tena faly ny Eoropeana ry zalahy manao izany mazava tsara tarehy ny fomba miely patrana io tranga io. Aza miala raha hamaky ny lahatsoratra ho avy izay hampianatra anareo ny fomba miresaka, sy ny hisarika, tier Shinoa ny ankizivavy ny fomba tsara. Matokia ahy, dia tsy handeha ianao mba te ho tara avy. Mandra-pahatongan’ny fotoana manaraka
← Tsara indrindra Afaka Mampiaraka Toerana ho an'ny Lehibe sy ny Fifandraisana
Chat, free video mampifandray amin'ny alalan'ny webcam →